बेलायती प्रमसित गोर्खा आर्मीबारे त्रिपक्षीय सन्धिको कुरा : ट्विटरमा मात्र कि साँच्चै भयो? – MySansar
बेलायती प्रमसित गोर्खा आर्मीबारे त्रिपक्षीय सन्धिको कुरा : ट्विटरमा मात्र कि साँच्चै भयो?
Posted on June 13, 2019 June 13, 2019 by Salokya
बेलायत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र त्यहाँका प्रधानमन्त्री थेरेसा मेबीच बुधबार बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवास १० डाउनिङ स्ट्रिटमा भेटवार्ता भयो। दुई जनाको बीचमा के कुराकानी भयो भन्ने कुरा हामीलाई यहाँ बसेर थाहा हुने कुरा भएन। कि त्यहाँ गएका नेपालीमध्ये कसैले भन्नुपर्‍यो। कि चाहिँ बेलायती प्रमका प्रवक्ताले भन्नुपर्‍यो।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले गरेको ट्विट अनुसार ब्रिटिस गोर्खा सैनिक सन्दर्भमा सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो भएको भन्दै नयाँ परिवेश अनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताए रे प्रमले।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: ब्रिटिश-गोर्खा आर्मीका सम्बन्धमा सन्१९४७मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच सम्पन्न त्रीपक्छीय सन्धी पुरानो भयो। यस सन्दर्भमा भर्ती, अवकाश तथा अवकाशपछिको अवस्था समेट्ने गरी नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्छ, नेपाल र बेलायतबीच द्विपक्षीय सन्धी गर्नु पर्छ।
— Kundan Aryal (@TheRealKalamchi) June 11, 2019
परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यसै भन्नुभो
तर डाउनिङ स्ट्रिटका प्रवक्ताले राखेको विज्ञप्तिमा चाहिँ त्यस्तो छैन। ब्रिटिश गोर्खा सैनिक बारे यस्तो छ-
The Prime Minister stressed the important role of the Gurkhas, who continue to serve in the British Armed Forces with honour and distinction.
उनका प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा मात्रै छ यसमा। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्रिपक्षी सन्धिको कुरा ट्विटरमा मात्र गरेका हुन् कि साँच्चिकै पनि गरेका हुन्?
गरेको हो भने यसो पनि भने है नेपालका प्रधानमन्त्रीले भनेर किन आएनछ विज्ञप्तिमा? कि त्यो महत्वको कुरा नभएकोले हो? दुई देशबीच द्विपक्षीय सन्धि गरौँ भनेको कुरा बेलायतलाई उल्लेखै गर्न लायक नभएको त हैन कि।